Dood ku Saabsan Qorshaha Qaranka oo Garoowe Lagu Qabtay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Dood ku Saabsan Qorshaha Qaranka oo Garoowe Lagu Qabtay
Dood ku Saabsan Qorshaha Qaranka oo Garoowe Lagu Qabtay
Garoowe (XT): Waxaa magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowladda Puntland lagu qabtay madal lagu lafa gurayay Qorshaha Horumarinta Qaranka oo ay ka qeyb qaateen dhallinyaro, Haween, Qeybaha kala duwan ee Bulshada Rayidka ah iyo Odayaasha Dhaqanka.
Qorshaha ayaa qeyb ka ah hawlo ay dhawaanahan waday Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya kaasoo lagu doonayo in la helo qorshe horumarineed oo dhameystiran oo lagu saleeynayo baahiyaha ay qabaan dhammaan deegaannada kala duwan ee dalka.
Wasiir Ku Xigeenka Qorsheynta ee Puntland Mudane Saciid Faarax iyo Prof Maxamed Saciid Samatar oo ah dhaqaalyahan Soomaaliyeed ayaa marti ku ahaa dooddan, waxayna siyaabo kala duwan u sheegeen muhiimadda uu qorshaha qaranka u leeyahay dalka iyo sida Puntland ay kaalinteeda uga gaysanayso sidii loo heli lahaa wax u qalma Umadda Soomaaliyeed.
“Puntland waxa ay leedahay qorshe qaran oo 5 sano oo ay 3 sano ka harsantahay. Waxaa hubaal ah in aysan Puntland kaligeed wax qabsan karin haddii qeybo kamid ah dalka ay ka jiraan dibu dhac iyo amni xumo. Waxaan ku rajo weynahay in dalku yeesho qorshe qaran oo mid ah. Sidoo kale waxaan rajeynayaa in ay Puntland hormuud u noqoto wax walba oo umadda Soomaaliyeed isu keenaya” Ayuu yiri Wasiir Ku Xigeenka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah e Puntland.
Qaar kamid ah dadkii kasoo qeybgalay madasha ayaa muujiyay in Puntland ay haysatay xasillooni iyo amni muddo 18 sano ah, loona baahanyahay in qorshahan loogu daro keeda u gaarka ah maadaama qeybo kamid ah dalka aysan wali gaarsiisneyn heerka Puntland ay maanta joogto.
Prof Maxamed Saciid Samatar oo ka jawaabayay su’aashan ayaa sheegay in hadda uusan jirin qorshe qaran balse la wado sidii loo sameyn lahaa taasoo talooyin iyo tusaaleyaal laga doonayo dadka deggan Puntland. Prof Samatar ayaa intaa ku daray in qorshaha qaranka sameyntiisa la waafajin doono baahiyaha ay qabaan shacabka Puntland oo aan dusha sare waxba looga keeni doonin.
Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa kulamo wadatashi ah oo ku saabsan Qorshaha Horumarinta Qaranka ku qabatay magaalooyinka Garoowe, Kismaayo, Cadaado, Baydhaba iyo Muqdisho si xog uruurin iyo talo wadaag loola yeesho dadka deegaannadaas.
Qorshaha Qaranka ayaa badali doona kan ‘New Deal’ loo yaqaano oo ay beesha caalamku ku taageerto hay’adaha dowladda Soomaaliya. Nidaamkan Cahdiga Cusub ayaa lagu tilmaamay daruur xagaa maadaama uusan wax la taaban karo kusoo kordhin dalka.
Qorshaha Horumarinta Qaranka ayaa xooga saari doona saddex qeybood oo kala ah dowlad wanaaga, koboca dhaqaalaha iyo horumarka arrimaha bulshada. Sidoo kale tiirarka lagu dhisayo qorshahan ayaa waxa alaf dhabar u ah sidii loo horumarin lahaa Xoolaha, Beeraha, Kalluumeysiga, Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Awoodda Korontada.
Soomaaliya ma yeelan wax qorshe Qaran ah taniyo burburkii dowladdii dhexe ee kacaanka, waxaana la filayaa in qorshahan cusub uu wax weyn ka tari doono dib u yagleelidda qaran xooggan oo isku filan. Haddii lagu guuleysto dhameystirka qorshahan, waxaa dhaqagelintiisu bilaaban doontaa 1da Janaayo, 2017 wuxuuna socon doonaa muddo 3 sano ah oo ku eg dabayaaqada 2019.
Next articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galay Madasha MAAN